World jiga	Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Your gaarka ah waa mid aad muhiim noogu. Iyadoo la raacayo, waxaan horumarin ku siyaasadan in la fahmo sida ay u ururiyaan, u isticmaalaan, isgaadhsiin oo bixino oo isticmaalaan macluumaadka shakhsiga ah. Soo socda wuxuu hoosta ka xariiqayaa sharciyada macluumaadka gaarka ah.
Ka hor ama waqtiga ururinta macluumaadka shakhsiga ah, waxaan aqoonsado doonaa ujeeddooyinka macluumaadka la ururiyo.
Waxaan soo ururin doonaa oo ay isticmaalaan macluumaad shakhsi ahaaneed oo keliya si ay u gutaan ujeeddooyinkan ku cad noogu iyo ujeedooyin kale oo lagu dhegeysan, haddii aan helo ogolaansho ah qofka ay khusayso ama sida sharcigu u baahan yahay.
Waxa keliya oo aanu sii hayn doona macluumaadka shakhsiga ah sida inta loo baahan yahay si ay u gutaan, kuwaas oo gool.
Waxaan soo ururin doonaa macluumaadka shakhsiga ah hab xalaal iyo cadaalad ah iyo, halka ay ku habboon, la aqoon ama ogolaansho shakhsiga.
Warbixin-shaqsiyeedka waa inay la jaan qaadaan ujeeddooyinka waxa loo isticmaali doonaa iyo sida loo baahan yahay ujeedooyin kuwa, waa in si sax ah, ee markaa la joogo.
Waxaan ilaalin doonaa macluumaad shakhsi by dhawrista ammaanka looga hortago wixii khasaaro ama xatooyo iyo sidoo kale helitaanka aan la ogolayn, siidaynta, koobiyeynta, isticmaalka ama wax ka beddelid.
Waxaan ka dhigi doonaa in la heli karo macluumaadka macaamiisha ku saabsan siyaasadda iyo dhaqanka la xiriira maamulka macluumaadka shakhsiga ah our.
Waxaan u isticmaali advertising dhinac saddexaad ee Meteodb.com si ay u taageeraan goobta. Qaar ka mid ah xayeysiiya kuwaas isticmaali karaan technology sida cookies iyo kati web (tusaale ahaan, iyadoo la isticmaalayo Google Most Google). Waxaa sida caadiga ah loo isticmaalo ujeedada ugu ad-bar ama muujinaya xayeysiis gaar ah oo ku salaysan goobo gaar ah oo booqday.
Waxaa naga go'an in qabashada ganacsigayaga oo waafaqsan mabaadida guud, kuwaas oo si loo hubiyo in macluumaadka shakhsiyeed la ilaaliyo oo la hayo.